Ihe m mụtara na CloudCamp | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 5, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọ na-egbu oge (izu 1) n'ihi snow n'izu gara aga, CloudCamp Indianapolis pụọ n'enweghị nsogbu n'abalị a. Ọ bụrụ na ị bụ ọ bụghị si Indianapolis - ị kwesịrị ị na-agụ. CloudCamp bụ ihe ọhụụ ma nwee ya na obodo ukwu dị n'akụkụ ụwa niile. N'ihi isiokwu ahụ nka na ụlọ ọrụ na-edu ndú nke BlueLockAnyị mere ihe ịga nke ọma ebe a na Indy.
Ọ bụrụ n’ị na-eche ihe Cloud Computing bu, Bluelock enyela ụfọdụ mkparịta ụka maka ịkọwapụta okwu a dị egwu.
Igwe ojii na kọmputa na Indianapolis?
Indianapolis na-enweta nlebara anya na mba na mba ụwa n'ihi ụgwọ dị ala, nke kwụsiri ike nke metụtara ike na ezigbo ala - nnukwu ihe abụọ na-achọpụta ụgwọ akwụ ụgwọ. Ọzọkwa, ihu igwe anyị siri ike ma anyị gafere ụzọ dị iche iche nke ịntanetị na North America. Ọ bụrụ na ị na-akwado ngwa gị n'ụlọ nkwakọba data data California ugbu a - ị nwere ike ile anya!
BlueLock bụ onye ndu ụwa na Cloud Computing
Ekwesịrị m ime ihe n'eziokwu, ka m na-anụ ka Pat O'Day na-ekwu okwu, ụjọ na-atụkwu m maka ihe nwoke ahụ maara banyere ngụkọta igwe ojii, njikwa ịba uru, njikwa grid, njikwa ụlọ nkwakọba data, Virtualization, VMWare… ị ga-akpọ ya na nwoke ahụ maara ya. Ọ na-ekwu okwu dị nro, na-eme amara, ma nwee ikike ime anwansi ịgwa anyị ndị na-amaghị teknụzụ na ụlọ ọrụ ahụ!
Adịghị m discounting ndị ọzọ na otu! John Qualls na Brian Wolff bụ ezigbo ndị enyi mana n'abalị a, Pat nọ na-apụta ìhè.
Hapụ Oge: App Scalability
Otu n'ime nnọkọ ahụ m gara bụ onye ndu Ed Saipetch. Ed rụrụ ọrụ na The Indianapolis Star mgbe m mere ma wuo ọtụtụ n'ime scalability na ngwa na akwụkwọ akụkọ. Ọ wetara ụfọdụ anwansi n'oge ahụ - enwechaghị ego na ọtụtụ ihe ọ chọrọ iji wulite ngwa ngwa na agụba ego.
Ed kesara otu ton banyere ngwa ọhụụ ndị enwere ike iji maka nnwale ibu ọrụ na nnwale ọsọ ọsọ yana mkparịta ụka dị mma banyere ije na ihe ọ pụtara site na-eto ma na-ebuli elu. Mkparịta ụka ahụ masịrị m nke ukwuu.
Sharding bụ okwu ọrụaka?
[Fanye Beavis na Butthead ọchị]
Anyị tụlere sharding, okwu nke m chebere naanị maka ime ụlọ ịwụ ọchị nke m hụrụ na fim otu ugboro. Nkọwa bụ n'ezie ụzọ nke ịlele ngwa gị, kama nke ọjọọ, naanị site na ịmepụta akwụkwọ nchekwa data ọhụụ na ịkwanye ndị ahịa gaa na ọdụ data dị iche iche iji belata ihe mgbu nke ịkụ otu nchekwa data mgbe niile.
Hapụ Oge: Cloud ROI
Ọnụ ego ejikọtara na igwe ojii nwere ike ịdịgasị iche - site na obere ihe ọ bụla na sistemụ a na-enyocha nke ọma ma chekwaa nke ọma. BlueLock's flavor bụ Infrastructure as a Service - ebe ị nwere ike isi isi ọpụpụ isi ọwụwa nke akụrụngwa na otu ha ka ị nwee ike itinye uche na ntinye na uto!
Agara m na mkparịta ụka Return na Investment na-eche na anyị ga-enwe nkuzi kpụ ọkụ n'ọnụ na nyocha nke ihe ndị dị mkpa maka ọdịnala na igwe ojii. Kama, Robby Ogbugbu duziri mkparịta ụka pụtara ìhè banyere uru na ọghọm nke ma na-ekwu maka mgbochi mgbochi.
Egwu bụ ọnụọgụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike itinye ụfọdụ ọnụọgụ… ego ole ka ọ ga-eri ma ọ bụrụ na ịnweghị ike itolite ozugbo? Ego ole ka ọ ga-eri ma ọ bụrụ na ị gbadaa ma chọọ iweta gburugburu ebe obibi eweghachiri? Ọnụ ego ndị a, ma ọ bụ ego ha furu efu, nwere ike ikpuchi nickel na dimes ndị e nyochara na ọdịnala ọdịnala.
Special ekele BlueLock maka a ebube kwadoro omume (pun zubere). Apụghị m ichere ịbịa n'ụlọ na ịde blọgụ maka sharding.
Tags: igwe-ojiígwé ojii Mgbakọígwé ojii
Feb 5, 2009 n’elekere 10:31 nke abali
Anyị kwurịtara banyere ịkọ nkọ, okwu m chebere nanị maka ịsa ahụ ụlọ ịwụ ahụ m hụrụ na fim otu ugboro. ”
Achịrị m ọchị nke ukwuu, ọ dị m ntakịrị mma.
Ọzọ, [Fanye Beavis na Butthead ịchị ọchị]
Feb 5, 2009 n’elekere 10:47 nke abali
Daalụ maka nkwụnye ahụ, Doug! Cloudcamp bụ nnukwu ihe omume.
Anaghị m na Ed na-ekwu banyere sharding, ma m chere na m ga-dokwuo anya na nke a na obibia bụchaghị "obi ịta mmiri." Ọtụtụ mgbe, sharding na-ezo aka na-agbasa nchekwa data gị iche tinyere ngwa-kpọmkwem kpatara ahịrị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na data sitere n'aka onye ahịa anaghị emetụta data sitere n'aka onye ahịa ọzọ, ịnwere ike kewaa isi nchekwa data gị n'akụkụ abụọ: AL na MZ.
Iji chekwaa ụmụ okorobịa (dị ka Ed) nke a bụ ụdị azịza ọjọọ, n'ihi na ọ pụtara na ị ga-enwe ọtụtụ ọdụ data ejiri rụọ ọrụ nke ọma n'otu ụzọ ahụ. Mana ọ bụ nnukwu ụzọ ịbawanye arụmọrụ na-agbakwunyeghị ụgwọ dị ukwuu!
Feb 5, 2009 na 7:47 PM
Crude nwere ike ịbụ okwu ka mma, Robby. Nkọwa dị ukwuu - ọ bụ azịza nwere ike ire, ntakịrị ntakịrị ike okike.
Feb 6, 2009 n’elekere 11:36 nke abali
“Ike ọjọọ” dị mma. Ma ịmara okwu mgbe ochie a na-ekwu: “Ọ bụrụ na ike dị egwu anaghị arụ ọrụ, ikekwe ị naghị ezu iji ya!”